သတင်း - ratchet ချည်နှောင်ရန်မိတ်ဆက်
DCHF Electric Chain Hoist
HSH-DC Lever Block
HSH-DH Lever Block
HSH-DL Lever Block
HSH-V Lever Block
တစ်ခုမှာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ratchet ချည်ထားတာပါ။
Ratchet tie down သည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ရွေ့လျားမှု၊ ပို့ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုန်စည်သိုလှောင်မှုအတွင်း အသုံးပြုသည့် ပုံသေလုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်။၎င်းတို့သည် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ပေါ့ပါးပြီး လည်ပတ်ရလွယ်ကူပြီး သော့ခတ်ထားသည့်အခါ အရာဝတ္ထုများ ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
၎င်းသည် အဓိကအားဖြင့် တင်းကျပ်သည့်အခန်းတွင်ပါဝင်သည့် သံမဏိဖောင်ပုံစံကို အားဖြည့်ခြင်းနှင့် သစ်သားပျဉ်ပြားများကို ဖိခြင်းအတွက် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိရိယာဖြင့် တင်းကျပ်ပြီး ၎င်းကို လိပ်ပြာချိတ်ဖြင့် ချိတ်ပါ။၎င်းသည် လည်ပတ်ရန် လွယ်ကူပြီး အခြား ratchet ကြိုးချည်နည်းများထက် စံကိုက်ညှိနှုန်း ဆယ်ဆကျော် မြင့်မားသည်။
သုံး။အသုံးပြုနည်း heavy cargo lashing ကြိုး
အဆင့် 1- ချိတ်နှစ်ခုကို အောက်ခြေတွင် ချိတ်ထားပြီး webbing ကို နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရန် လိုအပ်သည်။
အဆင့် 2: ကိုဖွင့်ပါ။ ပြန်ဆုတ်နိုင်သော တင်းမာသော ကုန်တင်ကြိုးများဟာ့ဒ်ဝဲ၊ webbing သည် အလယ်ကိုဖြတ်ပြီး အလယ်တည့်တည့်မှ ဖြတ်သွားပါသည်။
အဆင့် 3- ကြိုးကို ကြိုတင် တင်းကျပ်ပါ။
အဆင့် 4- လက်ကိုင်ကို အနောက်သို့ လွှဲ၍ ကြိုးကို တင်းကျပ်စေပြီး ပြီးအောင် ပြင်ဆင်ပါ။
အဆင့် 5- အောက်ပါအဆင့်များသည် polyester ratchet ချည်နှောင်ထားသော load သိုင်းကြိုးကို ချိတ်ဖြင့် ဖြေလျော့ခြင်း၊ လက်ကိုင်၏ဖျူးကို ဖိခြင်း၊ ratchet tie down hardware ကို အများဆုံးဖွင့်ကာ rotating shaft အလိုအလျောက်ထုတ်လွှတ်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အဆင့် 6- ကြိုးကိုဆွဲထုတ်ပြီး အပြီးသတ်ရန် ratchet ကြိုးကို ဖြည်လိုက်ပါ။
1.aကိုသာသုံးပါ။ratchetဆင်းချည်မကွဲပါက တံဆိပ်သည် စွမ်းရည်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ညွှန်ပြနိုင်သည်။
3. အသုံးပြုသောအခါတွင် ကြိုးကို မချည်ပါနှင့်
4. အသုံးပြုသည့်အခါ၊ အထည်ကို ဝတ်ဆင်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖြတ်တောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် ချွန်ထက်သော အစွန်းများနှင့် ထောင့်များ ဝေးဝေးတွင် ထားပါ။
5. Tie downs ကြိုးများစီစဉ်ရန် လိမ်ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
6. ထိခိုက်ဒဏ်ရာမဖြစ်စေရန်အတွက် အရာဝတ္ထုကို ratchet ကြိုးပေါ်တွင် မထားပါ။
7. ချည်အောက်သိုင်းကြိုးပြားပြားချိတ်ကို Load lift အဖြစ် အသုံးမပြုပါနှင့်။
စာတိုက်အချိန်- မတ်လ ၂၅-၂၀၂၂
စလောင်းကို ဘယ်လို မှန်မှန်ကန်ကန် သုံးရမလဲ။
မောင်းတံကို စနစ်တကျ လည်ပတ်ပုံ...
အချိန်များအဆောက်အဦး၊ LIANGZHU လမ်း၊ YUHANG ခရိုင်၊ HANGZHOU မြို့၊ ZHEJIANG စီရင်စု၊ တရုတ်
ကျွန်ုပ်တို့ကို ယခုခေါ်ဆိုပါ-+86 13486165199